Wafdi uu Hogaaminayo wasiirka badda iyo kaluumaysiga dowladda FKMG ah oo bari sahan ugu baxaya gobolada puntland.
canabmumtaz@yahoo.com Feb 21, 2005
Wafdigan oo ka kooban sideed xubnood waxaa horkacaya wasiirka badda iyo kaluumaysiga Xasan Abshir Faarax waxa ayna ka dagi doonaan magaalada Garoowe oo ah magaala madaxda puntland Xubahan wafdigan oo kala ah.
Wasiirka badda iyo kayraadka.Xasab Abshir Faarax.
Wasiiru dowlaha Madaxtooyada Khaalid Cumar Cali.
Deeqa Col u Joog Wasiir ku xigeenka Iskaashiga Gobolada.
Mire Xaaji Faarax Wasiir ku xigeenka lacagta.
Maxamad Axmad Kulan wasiir ku xigeenka Dastuurka iyo arimaha Federaalka.iyo
Saciid Maxamuud…..Wasiir ku xigeenka horumarinta reer miyiga.
Wasiirka ka mid ah wafdigan oo lagu magaabo Khaalid Cumar Cali ahna wasiiru dowlaha Madaxtooyada Dowladda FKMG ah ayaa ii sheegay in wafdigan uu yahay mid sahan ah kana mid ah wafdiyadda ay dowladdu u dirayso gobolada dalka oo dhan si ay usoo qiimeeyaan xaalada ka jirya goobahaas ee nabad galyo.
Wafdigan waxaa kale oo ay u baxayaan ayuu intaas ku daray wasiirka in ay u tacsiyeen intii uu ka tagay islaankii(suldaankii Allaha u Naxariisto) ee dhawaan ku geeriyooday halkaasi iyo beesha uu ka tagayba.
Wafdiga inta ay halkaasi joogaan waxa ay kula kulmi doonaan Madaxda maamulkaas iyagoo u bandhigi doona barnaamijyadda dowladda ee ku saabsan ka sidii loo heli lahaa amaan iyo nabad galyo si dowladda ay ugu fududaato fulinta qorshaheeda shanta sano.
Wafdigani waxa ay booqan doonaan inta ay halkaasi joogaan meelo badan oo ka mid ah gobolada gaalkacyo,garoowe,boosaaso iyo meelo kale oo ay mid tahay xadka qaybiya labada maamul iyo ee Puntland iyo Somaliland.
Sahanka wafdigan ayaa qaadan doona mudo todobaad ah kadibna waxa ay dib ugu soo laaban doonaan magaaladda Nairobi.
Faafin SomaliTalk.com | Feb 21, 2005